�Wafdigii dowladda oo ku sugan maanta baladwayne.
�Dr.C/qaasim:Keenis Ciidamo Safka hore waa abuurid dagaal sokeeye.
�Aqoonyahano shir ugu dhamaaday Nairobi.
�Safiirka mareykanka oo aqoonayahaniinta u sheegay in ciidamo safka hore aysan xal keeni doonin.
Shirkii Jar�aad ee Dr.C/qaasim.
Madaxweynihii hore ee dowladdii KMG ahayd ee jabuuti lagu dhisay DrC/qaasim Salaad Xasan ayaa shir jar�aad ku qabtay magaalada mogadisho xili ay wafdigii dowladda FKMG ahi ku sugnaayeen Jowhar.
C/qaasim waxa uu shirkiisa jar�aad uga hadlay Ciidamada la damacsan yahay in la geeyo Soomaaliya ee ka socda wadamada IGAD oo ay ku jiraan kuwa safka hore iyo Caasimadda Soomaaliya ee Mogadisho.
�Ciidamo ka socda Wadamada Safka hore oo soomaaliya la soo galiyo waxay keenaysaa cadaawad hor leh oo laga dhex abuuro dadka soomaaliyeed� ayaa ka mid ahaa hadaladii C/qaasim ee ku jiray shirkii jaraa�id ee uu Saxaafadda kala hadlayay shacabka soomaaliyeed.
Dib u heshiisiinta mar uu ka hadlayay waxa uu sheegay in dowladani ay mas�uuliyad ka saran tahay in ay bilowdo dib u heshiisiin dhex marta dadka soomaaliyeed,iyadoo laga soo bilaabayo gobolada laguna keenayo magaalooyinka.
�Dowladani waxay ka nasiib badan tahay dowaldaydii waayo waxaa ku wada jira hogaamiyayaashi siyaasada oo dhan,dowaldaydii waxaa dib u dhigay dagaalo kaga yimid hogaamiyaasha siyaasadad ee hadda ku jira labada golle�Hadalkan waxaa yiri Madaxweynihii hore ee Dowladda KMG ahayd ee Lagu soo dhisay Dalka Jabuuti Dr.C/qaasim Salaad Xasan.
Aqoonayahanadan oo aan wali soo saarin wax go�aano ah oo ka soo baxay shirkaas ayaa kulankoodu ugu horeeyay la yeeshay Safiirka maraykan u xilsaran la socoshada arrimaha soomaaliya.
Beesha caalamku waxa ay horay u sheegeen in Ciidamo aan loo dhamayn aan loo dirin,waxayna ku baaqeen in baarlamaanka FKMG ahi u arrintan go�aankeeda leeyahay kadib hadii loo arko xal la keeno,balse inta la isku khilaafsan yahay laga fiirsado,waxayna ku tilmaameen in ciidamadas ay sii xumayn karaan xaaladda ka jirta hadda soomaaliya iyagoo abuuraya khilaaf ka dhex dhasha soomalida.
�Xildhibaano ka biya diidsan in Geddi u safaro jowhar
�Golaha Wakiilada DGPL oo Magacaabay Guddi Joogta ah
�Muxiyadiin Darbo Weyne oo siro Isboorti daaha ka rogay!
�Cabdi Xoosh oo sheegay in loo doortay kursigii Gaani
�Nin dablay ah oo oo rasaas la beegsaday dayaarada qaadka